नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले माघ २ देखि ५ गतेसम्म भर्चुअलमाफत् शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेको छ। कोरोना प्रकोपका बाबजुद नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि तेश्रो मुलुकमा जाने विद्यार्थीहरू शैक्षिक मेलामा उल्लेख्य सहभागी भएका छन्। यससँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पुरानो गुल्जार फर्किने अपेक्षा आयोजकहरूले गरेका छन्। नेपालमा कोरोना प्रकोप, शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर र इक्यानको शैक्षिक मेलाका सन्दर्भमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का द्वितीय सचिव तथा कान्तिपुर इन्टरनेशनल ओपन एजुकेशन प्रालिका संस्थापक एवं अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ (बिके) सँग नेपाली पब्लिकले गरेको कुराकानी:
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को १४औं शैक्षिक मेलाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरू कसरी लाभान्वित हुनुभयो? इक्यानको अबको रणनीति कस्तो हुन्छ?
–कोरोना महामारीले विश्व नै ग्रसित भएको विषय चर्चा गरिरहनु परेन। यसले विश्वको आर्थिक बृद्धिदर नै ठप्प बनाएको छ। सबै क्षेत्र नै ठप्प भएको अवस्था छ। त्यसबाट यो कन्सल्ट्यान्ट क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन। अहिले भ्याक्सिनेशनको कुरा आइरहेको छ। त्यसले केही आशा त जगाएको छ। भ्याक्सिनेसन शुरु भएपछि पनि ग्लोबल मोबिलिटी रोकिँदैन। विश्व नै ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ। ग्लोबल मोबिलिटी बढ्छ नै। सायद चाँडै भ्याक्सिनेशन ओभर आइसकेपछि उत्साहजनक तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। इक्यानले मार्केट लिडरको रुपमा एजुकेशन कन्सल्ट्यान्टको मार्केटमा, यसको मेम्बरको रुपमा हेर्दा, स्टेक होल्डरको रुपमा हेर्दा इक्यान मार्केट लिडर नै हो। इक्यानले सधैं हरेक कुरामा एउटा बेञ्च मार्क सेट गर्दै आइरहेको छ। भर्चुअलाइजेशन फियरमा पनि इक्यानले बेञ्च मार्क सेट गरेको छ, एक हिसाबमा। जसले गर्दा विद्यार्थी हुन्, एडुकेटर हुन्, एजेन्टस्हरू, सबैले एकठाउँमा भेला भएर फर्स्ट इन्फर्मेशन इन्फर्म च्वोइसका लागि हामीले डेलिभरी गर्ने प्रयास गरेका छौं। समग्रमा कोरोना प्रकोपका बावजुद इक्यान भर्चुअल शैक्षिक मेला अभूतपूर्व रुपमा सफल भएको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को १४औं शैक्षिक मेलाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर सम्पूर्ण रुपमा जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ।
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थी र अभिभावकका कस्ता–कस्ता अपेक्षा पूरा भए?
–कोरोना प्रकोपले गर्दा अहिले पनि विश्व नै घरभित्र सीमित भएको छ। बाहिरका प्रोभाइडर, एजुकेशन प्रोभाइडर, राम्रा–राम्रा कलेज, युनिभर्सिटीहरू, लोकल एजेन्टस्हरू ट्युटर्सहरू भए, विद्यार्थीहरू भए, उनीहरू भेटघाट भएर कुराकानी गर्ने माहोल थिएन। विश्वव्यापी रुपमै त्यस्तो माहोललाई हामीले भर्चुअल रुपमा भेट गराइदियौं। सबै एडुकेटरहरू, विद्यार्थीहरू, ट्युटर्सहरू एउटै प्ल्याटफर्ममा आएर आफूले चाहेको र खोजेको इन्फर्मेशन उहाँहरूले हाम्रो भर्चुअल फेयरबाट पाउनुभयो। उत्साहजनक सहभागिताले हामीलाई अझै आत्मविश्वास बढाएको छ।
जसले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित शैक्षिक मेलामा उपस्थिति जनाउन सक्नुभएन, उहाँहरूलाई समेट्न इक्यानसम्बद्ध शैक्षिक परामर्श क्रियाशील व्यवसायीहरूको योजना के छ?
–अब वैकल्पिक तरिकाले भए पनि व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भइसक्यो। इक्यानले एउटा ठूलो भर्चुअल मेला नै आयोजना गरेर नौलो र समयानुकूल सबै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। इन्डिभिजुअल युनिट कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ, एजुकेशन प्रोभाइडर हुनुहुन्छ। इन्डिभिजुअल्ली पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा छ। साथै इक्यानको मेम्बरहरू पनि शिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मेम्बरहरूलाई डिजिटल्ली पनि सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। भौतिक दुरी कायम गर्दै अहिले हामीले क्लासहरू पनि सञ्चालन गर्दैछौं। काउन्सिलिङ सर्भिस दिनेदेखि सबै कार्यक्रमहरू शुरु भइसकेको छ। अहिले हाम्रा सदस्यहरूको अफिस खुलिरहेका छन्। हामीले अफिसबाट र भर्चुअल माध्यमबाट पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छौं।
अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले कोरोना महामारीका कारण कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्? ती समस्या समाधान गर्नका लागि इक्यानले कस्तो पहल गरिरहेको छ?
–इक्यानले महामारी शुरु भएदेखि नै नेतृत्व लिएर विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई के–कस्तो समस्या छ भनेर बुझ्ने र त्यसको समाधानका लागि हटलाइन नै शुरु गरेको थियो। उहाँहरूका समस्यालाई हामीले सामूहिक रुपमा सम्बन्धित निकायमा लगेका थियौं। धेरै हिसाबले हामीले विद्यार्थीको समस्या समाधानका कुरा गरिरहेका छौं।
शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूलाई कोरोनाले गम्भीर संकटतिर धकेलिरहेको अवस्थामा सरकारबाट कस्तो सहयोग प्राप्त गर्नुभयो?
–सरकारले व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी सफ्टलोन दिएको छ। इक्यानको पहलमा यो क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा रहेको छ। जसले गर्दा प्रक्रिया पुरा गर्ने सदस्यले सफ्टलोन लिन पाउने अवस्था छ। नेपालको इकोनोमी सानो छ। ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि छैन। हामीलाई सरकारले सक्ने ठाउँमा सहयोग गरेको अनुभूति भएको छ। हामीले त्यसैमा सन्तुष्टि मान्नुपर्छ।
व्यवसाय पुनरोत्थानका लागि सरकारले रणनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ? अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
–सरकारले अबको अवस्थामा कोरोनाले चुनौती छँदै छ। बाहिर जान चाहनेहरूका लागि सहजीकरण गर्ने कुरा छँदै छ। त्यससँगै अहिले कन्सल्टिङ फिल्डमा इन्टरनेशनल कम्पनीहरू अनाधिकृत रुपमा भित्रिने अवस्था छ। जसले सरकारलाई पनि घाटा पुर्‍याउने गरी रेभ्युनी क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, र त्यसलाई आफूले प्रत्यक्ष रुपमा बाइपास गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो रुपमा इन्टरनेशनल कम्पनीहरू नेपालमा आउने क्रम बढ्दो छ। अब सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा यहीँका संस्थालाई कसरी चाँहि राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी हाम्रो विद्यार्थीलाई बढी भ्यालू दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर स्थानीयस्तरका कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
कोरोना प्रकोपका कारण धेरै व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा पनि पर्नुभयो। अब नवीनतम ढंगले अगाडि बढ्नका लागि के सोच बनाइराख्नु भएको छ?
–झण्डै एक वर्ष भयो, व्यवसाय ठप्प छ। अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई ब्लाण्डेड मोडमा एजुकेशन डेलिभरी गर्ने भर्चुअल अनसाइटबाट पनि हामीले थप इन्फर्मेशन र बेनिफिट दिन सक्छौं। र, आफूले पनि एउटा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने अवस्था हुन सक्छ। अबको अवस्थामा विद्यार्थीलाई बाहिर जान तयारी गर्ने हिसाबमा एड्मिशन गर्ने कुरामा, रजिस्ट्रेशन गर्ने सवालमा भर्चुअल्ली वा सहज हुने अवस्थामा क्लासमै पनि ल्याएर हामीले विस्तारै पुनरोत्थानका लागि अगाडि बढ्न सक्छौं।
अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेश जान चाहने विद्यार्थी र अभिभावकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
–कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। त्यसले ग्लोबल मोबिलिडी एकदम खुम्चिएको अवस्था छ। जो विद्यार्थी बाहिर गएर अध्ययन गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले सम्पूर्ण कुरा बुझेर मात्रै जान आग्रह गर्दछु। कस्तो विषय पढ्न जाने हो, त्यसको उपयोगिता के हो, फी कति लाग्छ, सबै कुराको जानकारी लिनु आवश्यक छ। उहाँहरूले इक्यानका सदस्यहरूबाट सही परामर्श लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ। आफैले पनि केही रिसर्च गरेर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अध्ययनका लागि विदेश जान आग्रह गर्दछु।
#इक्यान #नेपाल_शैक्षिक_परामर्श_संघ #इक्यान_शैक्षिक_मेला #बिके_श्रेष्ठ #द्वितीय_सचिव
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १८:१९